Wararka - Astaamaha waxqabadka iyo meelaha laga codsado ee tuubooyinka kaarboonka
Astaamaha waxqabadka iyo meelaha laga codsado ee tuubooyinka fiber-ka kaarboon
Tuubbada kaarboon kaarboon, oo sidoo kale loo yaqaanno tubbada kaarboon, waa shey tubal ah oo laga sameeyay kaarboonka kaarboon iyo cusbi. Hababka wax soosaarka guud ahaan la isticmaalo ayaa ah duubista udgoon hore ee kaarboon kaarboonka, kaarboonka faylalka kaarboonka, iyo wareejinta. In geeddi-socodka wax soo saarka, noocyo iyo cabbirro kala duwan oo tuubooyinka kaarboonka kaarboon ayaa la soo saari karaa iyadoo loo eegayo hagaajinta caaryada. Dusha sare ee tuubbada kaarboonka kaarboonka ayaa la qurxin karaa inta lagu gudajiro wax soo saarka. Waqtigan xaadirka ah, dusha sare ee tuubbada kaarboon kaarboonku waa 3k matte caadi ah, matte twill, weave cad oo dhalaalaya, mataano dhalaalaya iyo qaabab kale.
Tuubbada kaarboon kaarboonku waxay leedahay faa'iidooyinka xoogga sare, iska caabbinta abrasionka, aashitada iyo caabbinta alkali, iyo miisaanka fudud. Intaa waxaa dheer, badeecadu waxay leedahay taxane ah sifooyin heer sare ah sida cabir ahaan mid deggan, koronto qabatinka, kala-baxa kuleylka, isugeyn balaadhinta kuleylka, is-saliidaynta, nuugista tamarta iyo iska caabinta shoogga. Waxay leedahay faa'iidooyin badan sida qalab gaar ah oo sarreeya, caabbinta daalka, caabbinta qulqulka, iska caabbinta heerkulka sare, caabbinta daxalka, iyo iska caabbinta.
Meelaha dalabka ee tuubada fiber carbon:
1. Iyadoo la adeegsanayo iftiinkeeda iyo xooggeeda iyo iftiinka iyo qalabka farsamada adag, waxaa si weyn loogu isticmaalaa duulista hawada, aerospace, dhismaha, qalabka farsamada, warshadaha militariga, isboortiga iyo waqtiga firaaqada iyo qalabka kale ee dhismaha.
2. Isticmaalka iska caabinteeda daxalka, iska caabinta kuleylka, toosnaanta wanaagsan (0.2mm), iyo xoog farsamo sare, sheygu wuxuu ku habboon yahay mashiinka wadista qalabka daabacaadda guddiga wareegga.
3. Isticmaal iska caabbinta daalkeeda si aad ugu dalbato baalasha helikabtarka; u isticmaal yareynta gariirkeeda inaad ku dabaqdo qalabka maqalka.
4. Adeegsiga xooggeeda sare, gabowga, anti-ultraviolet, iyo astaamaha farsamo ee wanaagsan, waxay ku habboon tahay teendhooyinka, qalabka dhismaha, maro kaneecada, baalal qaadista, bacaha kubbadda, boorsooyinka, raajooyinka lagu soo bandhigayo xayeysiinta, dalladaha, shiraaca, qalabka jirdhiska , fallaadhihii fallaadhihii, Naadiyadii, shabagyadii jimicsiga golf, biinanka baddalka calanka, qalabka isboortiga biyaha, iwm.
5. Adeegsiga culeyskiisa fudud iyo astaamaha adag ee adag, sheygu wuxuu ku habboon yahay qaniinyo, maraqa duulaya, qaansooyinka, diyaaradaha korontada ku shaqeeya, iyo qalabka carruurtu ku ciyaarto ee kala duwan.